DVB TV – မသန်စွမ်းထိုင်လျက် ဘော်လီဘောသမားလေး ထူးကိုအကြောင်း ရုပ်သံ
1960 July 31, 2017
DVB TV – မသန်စွမ်းထိုင်လျက် ဘော်လီဘောသမားလေး ထူးကိုအကြောင်း ရုပ်သံ လူမသန်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ လူကောင်းပကတိတွေအားကျရလောက်အောင် သန်စွမ်းတဲ့…မပြည့်စုံမှုတွေကြားက ဘဝကိုဇွဲမလျော့ အရှုံးမပေးသူ ထိုင်လျက်ဘော်လီဘောကစားသမားလေးအကြောင်း ရိုက်ကူး၊ တင်ဆက်၊ တည်းဖြတ် – ထက်လူ
2394 July 4, 2017
DVB TV – တစ္ဆေ ဖမ်းသူများ ရုပ်သံမှတ်တမ်း ဆေးရုံဟောင်းတခုမှာ ခြောက်လှန့်မှုတွေ ရှိနေခဲ့တယ်…. ခြောက်လှန့်မှုတွေဟာ တကယ်လား??? ကောလဟာလတွေပဲလား??? မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေ တကယ်ပဲ ရှိနေတာလား??? မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကို စူးစမ်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အဖွဲ့တခုရှိတယ်၊ သူတို့က …… Ghost Hunter Myanmar… ရိုက်ကူး – သူရစိုး၊ ခိုင်ပန်းနု တင်ဆက် – ခိုင်ပန်းနု တည်းဖြတ် – ထက်လူ၊ ခိုင်ပန်းနု DVB TV – 04.07.2017
2062 June 29, 2017
2034 June 26, 2017
2345 June 13, 2017
ဇွန် ၆ အလုပ်သမားသပိတ် ၄၃ နှစ်ပြည့် ရုပ်သံမှတ်တမ်း
1071 June 6, 2017
ဇွန် ၆ အလုပ်သမားသပိတ် ၄၃ နှစ်ပြည့် ရုပ်သံမှတ်တမ်း တင်ဆက် – မောင်တူး DVB TV – 06.06.2017
2341 May 28, 2017
ဆန်းတိုဒိုမင်ဂိုဆိပ်ကမ်းတွင် သင်္ဘောကြီးတစီး ဆိပ်ခံတံတားကို ဝင်တိုက် (ရုပ်သံ)
1594 May 28, 2017
ဒိုမီနီကန်ရီပက်ဘလစ်နိုင်ငံ ဆန်းတိုဒိုမင်ဂိုမြို့တော်မှာ ဆိပ်ခံတံတားကို သင်္ဘောကြီးတစီးက ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆိပ်ကမ်းမှာ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မေ ၁၈ ရက်နေ့ မနက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ရုပ်သံထဲမှာ ကီဒန်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ သင်္ဘောကြီးက ဆိပ်ခံတံတားကြီးနဲ့ ဒန်ဒီဂိုဂိတ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကုန်သေတ္တာတော်တော်များများကို ဝင်တိုက်ခဲ့တာကို မြင်ရမှာပါ။ ဘယ်သူမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအရ သင်္ဘောကြီးက ဆန်းတိုဒိုမင်ဂို ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်ရောက်ခြင်း အရှိန်လျှော့ခုတ်မောင်းရတဲ့ နေရာမှာ ဆိပ်ကမ်းကပ်ချိန် ဒီလိုဆိပ်ကမ်းကို ဝင်ရောက်တိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ရုပ်သံထဲမှာတော့ သဘောင်္ကြီးက ရှေ့ဆက်တိုးလာလို့ ဆိပ်ကမ်းဝန်ထမ်းတွေက လုံခြုံရာဆီ ကစဉ့်ကလျား ထွက်ပြေးနေတာကို မြင်ရပါတယ်။ ဖယ်ရီဒယ်ကရစ်ဘီ ကုမ္ပဏီက ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ဒီသဘေ်ာကီးက ဆန်းဂျုဝမ် ပေါ်တူဂီနဲ့ ဆန်းတိုဒိုမင်ဂိုမြို့တွေကို ပြေးဆွဲ …Read more »
ရေဘုရင်မိကျောင်းကို ရေထဲမှာ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည့် ခြင်္သေ့ (ရုပ်သံ)
5529 May 14, 2017
ခြင်္သေ့တကောင်ဟာ မိကျောင်းတကောင်ရဲ့အနံ့ကို ရပေမယ့် မြစ်ချောင်းကို မကူးမဖြစ် ကူးဖြတ်ရမယ့်အတွက် ရေထဲကဖြတ်ပြီး ဆင်းကူးခဲ့ပါတယ်။ ရေထဲက သားကောင်ချောင်းနေတဲ့ မိကျောင်းကလည်း ခြင်္သေ့ရေထဲ ဆင်းဆင်းချင်း နောက်ကနေ လိုက်ပါတော့တယ်။ မိကျောင်းကြီးက ခြင်္သေ့ရဲ့ လည်ကုတ်ကို လှမ်းဟပ်လိုက်ချိန်မှာ ၂ ကောင်လုံး ရေထဲနှစ်မြှုပ်သွားပြီး မိချောင်းစာဖြစ်သွားပြီလို့ ထင်ရတဲ့ ခြင်္သေ့က မိကျောင်းပါးစပ်ကလွတ် ရေပေါ်ချက်ခြင်းပေါ်ကာ အမြန်ကူးခတ်ပြီး လွတ်မြောက်သွားတာကို မတ် ၂၅ ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့ ရုပ်သံထဲမှာ မြင်ရပါတယ်။ နောက်ထပ်ရုပ်သံမြင်ကွင်း တခုထဲမှာတော့ ရေထဲကူးဖြတ်လာတဲ့ ခြင်္သေ ၂ ကောင် နောက်ကို မိကျောင်းက လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ခြင်္သေတကောင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ထွက်ပြေးနိုင်ချိန်မှာ အခြားတကောင်ကတော့ နောက်က လိုက်လာတဲ့ မိကျောင်းနဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အသေအကြေ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာပါ။ နောက်ဆုံးမှာ မိကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ …Read more »